Arakan Eagle: October 2012
.(အမတ်ကြီးငကုသလ..နန်းတက်သောအခါတွင်လည်းပြည်သူများ...ငစွေ.အစ်က တီထွင်စပ်ဆိုကာ...ကိုတစ်မြိုဝင်တမြို.ထွက်ကပြရင်း...ဘုရင်သစ်ကို..ဝေဖန်တော်လှန်ဖိုကြိုးစား ခဲကြပြန်ပါတယ်)။ ဒါက...ရခိုင်ဘုရင်သီရီသုဓမ္မရာဇာ.နဲ...မင်းကုသလ..တိုအကြားနိုင်ငံရေးရှင်ပြိုင်မူမှာ...ဂီတအကြောင်းပါဝင်ဆပ်စပ်မူပါ....
အခြားတဖတ်ခောတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ.....ပဲခိုး..ဟံသာဝတီ..မှာ...အပံသုငယ်(ခေါ်)ဆင်ဖြူရှင်ဗညားဦးရဲ.သားဗညားနွဲမင်းသားဟာလည်း.....အသက်တဆယ်ခြောက်နှစ်မှာ....မယားတလမေဒယော...နဲအတူ...သီချင်းသည်တိုရဲ...အတိတ်တဘောင်(သီချင်း) ကို...မြို.လေးဘက်လေးတန်မှာ...နာယူဖို..အဒေါ.ကုန်းစတဲငယ်ကျွှန်တွေ.... စေလွတ်လိုက်ပါတယ်......
Posted by Eagle info dash at 08:03 No comments:
Labels: Article, Politic
Posted by Eagle info dash at 15:24 No comments:
-တပ်မတော်သည် ပြည်သူကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ပါ။ တပ်မတော် သည် အမျိုးသားရေးအတွက်.. ဆိုတာတွေရပါတယ်....
Posted by Eagle info dash at 15:05 No comments:
Ven. U Ottama
Pon Kan Thu Lay
Posted by Eagle info dash at 13:59 No comments:
" ရိုဟင်ဂျာ (သို့မဟုတ်) AL-QAEDA တို့ ၏ မဟာဗျူဟာ "
" ရိုဟင်ဂျာ (သို့မဟုတ်) AL-QAEDA တို့ ၏ မဟာဗျူဟာ " မိတ်ဆွေတို့ ... ကျွန်တော့် ဖခင် ကွယ်လွန်သူ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ထွန်းထွန်းနိုင် (ခ) ဦး နောင်ထွန်းလွင် ဟာ ရခိုင် တစ်ဝက် စပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခုတစ်လော ဖြစ်နေတဲ့ ကုလား ရခိုင် သတ်ဖြတ်မှုတွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာ တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော ရခိုင်စပ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ နက်ရှိုင်းစွာ နာကျင်ခံပြင်းရတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဒေါသကို ရှေ့တန်း မတင်ဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးစားပေးတွေးခေါ်ဖို့ လူတွေကို တိုက်တွန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြင်နေကြားနေရတာတွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒေါသထက် ပို အရေးကြီးတဲ့ အသိတစ်ရားတစ်ခု ရဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ ကျွန်တော် ဆက်စပ်တွေးတောလေ့လာရင်း .. ဖတ်မိသမျှ သိရှိသမျှတစ်ချို့ကို ဆက်စပ်တွေးကြည့်မိတဲ့ အခါမှာ .. လူတွေ မတွေးမိခဲ့တဲ့ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းပြီး လျှို့ဝှက်နက်နဲ တဲ့ လူမျိုးရေး စစ် မဟာဗျူဟာ တစ်ခု ကို တွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လို စဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကတော့ အားလုံးလဲ နား နဲ့ မျက်စေ့ နဲ့ မဆန့် အောင်ကို ကြားပြီး မြင်ပြီး ဖြစ်လောက်ပြီမို့ အကျယ်တဝင့် မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စ ကို သတိကြီးစွာ ထားပြီး ပြန်သုံးသပ်ကြစို့။
မသီတာထွေးဆိုတဲ့ ကလေးမ လေး ကို ရိုဟင်ဂျာ ၃ ယောက် အဓ္ဓမ ကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာ သွေးရိုးသားရိုး ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုဘဲ ဒီကိစ္စ အပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဒေသခံ ရခိုင် လူမျိုးတွေရဲ့ ဒေါသတွေဟာလဲ သဘာဝကျတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလို့ဘဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိ ရာဇဝတ်မှုကို တုံ့ပြန်တဲ့ ဘင်္ဂါလီ (ခ) ရိုဟင်ဂျာ ကုလားတွေရဲ့ မိုက်ရိုင်းစွာ တိုက်ခိုက်မှုတွေကရော ရိုးသားပါရဲ့လား။ ဒီဒေါသတွေ ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဟာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး တစ်ခု ရဲ့ အစွဲ သီးသန့် ကြောင့်လားဆိုတာတွေ ကို ဆက်စပ်တွေးကြည့်မိစရာတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် အမြဲ တွေးထားဖူးတဲ့ သီအိုရီ တစ်ခု ကို ထည့်ပြောပြမှရပါတော့မယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖြစ်လိုက်တိုင်းလဲ သေချာ လက်သည်မပေါ်ခဲ့သလို မိခဲ့ရင်လဲ ထိုသူဟာ ဘယ်အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသူရယ်လို့လဲ တိတိပပ ထွက်ဆိုလာတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။ ဒီမှာတင် ဖြစ်နေကြ ကောလဟာလ နှစ်မျိုး အမြဲ ထွက်လာပါတယ်။ အစိုးရ က လဲ ဒါ အတိုက်အခံတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များ နှင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို အရင် ဆုံး စွပ်ဆွဲလေ့ရှိသလို အတိုက်အခံတွေဖက်ကလဲ ဒါ အစိုးရ ရဲ့ ပြနေကျ နိုင်ငံရေး မျက်လှည့်တစ်ကွက်ဆိုပြီး တန်ပြန်စွပ်ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒိလို ဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော် နှစ်ဖက်လုံးက သုံးသပ်ချက်တွေကို မယုံခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ... ( ၁ ) အစိုးရ ဟာ ပြည်တွင်း မငြိမ်သက်မှု မရှိတော့ပါဘူး ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာ ကို အတင်းကြီးတောင် ဖန်တီးပြီး လုပ်ပြနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒါမှလဲ သူတို့ဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကောင်းရမှာ ဖြစ်လို့ပါဘဲ။ ဒီတော့ ဒီလို ကိစ္စ တွေ ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လုံးဝ မလိုလားဘူးဆိုတာ နားလည်သင့်ပါတယ်။ အများစု ယုံကြည်နေကြသလို တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်လို့ အာဏာ ပြန်သိမ်းရပါတယ်ဆိုတဲ့ ကလေးဆန်ဆန် ကျားကွက်ကိုရွှေ့ဖို့ ဒီလို လုပ်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ စစ်ဗျူဟာမှုးတွေ ကောင်းစွာ နားလည်ထားကြပါတယ်။ ( ၂ ) အတိုက်အခံတွေ ဆိုသူတွေ ကိုသေချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပြန်ရင်လဲ အုပ်စု ၄ ၅ ခု လုံးမှာ တူညီတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ ရှိပါတယ်။ ABSDF ဆိုရင်လဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ ပြည်သူ့ရင်သွေး ကျောင်းသားတွေကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အတွက် သူတို့ဟာ ပြည်သူလူထုကို ဘယ်တော့မှ နာကျင်အောင် လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ KNU KIA DKBA အပါအဝင် အခြားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဟာလဲ .. ဦးနေဝင်း အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီးကထဲက ဗိုလ်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကတိတွေ အားလုံး ကို ဖေါက်ဖျက်ခဲ့တာကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ .. မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေ နဲ့ တည်ထောင်ထားကြတဲ့အတွက် သူတို့ဟာလဲ ပြည်သူလူထုကို ဘယ်တော့မှ နာကျင်အောင် လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ အားလုံးဟာ မြန်မာ စစ်တပ် နဲ့သာ ထိပ်တိုက် ပစ်ခတ် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပေမယ့် သူတို့ သွေးချင်းတွေ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မှတ် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာလို့ ဒီလို ဗုန်းတွေ ခဏခဏ ထ ထ ကွဲ နေလဲ ... ဘယ်သူတွေ က ဒီလို မျိုး ဖျက်ဆီးမှုတွေကို လုပ်ချင်မလဲ ... တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ရခါနီးပြီဆိုတိုင်း အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူ နဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ ကြားမှာ သုံးပွင့်ဆိုင် သံသယတွေ ကြီးထွားလာအောင် အမုန်းရဲ့ မီး ကို ဘယ်လိုလူတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက် နဲ့ မွှေးနေတာလဲ ... ပြည်ထောင်စု မငြိမ်သက်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်သူတွေမှာ တိုက်ရိုက် အကျိုးရှိမလဲ ... အေးချမ်းငြိမ်သက်သွားပြီဆိုရင် ဘယ်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို စထိခိုက်လာနိုင်မလဲ ... ဒီ War Monopoly ကို နောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်သူတွေက စနစ်တကျ စီမံဖန်တီးနေတာလဲ ... ဒီမှာ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေ စကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ကြောင့် အမေရိကန် အင်္ဂလန် စတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ နဲ့အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မြန်မာ အစိုးရ မျက်နှာပန်းစပွင့်လာမှုကို လုံးဝ မနှစ်သက်နိုင်သူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အရမ်း ခိုင်မာလာမှာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီ ဘုံရန်သူဟာ အမေရိကန် နဲ့ မဟာမိတ် နိုင်ငံတွေ ကို မုန်းနေသူတွေ ဖြစ်သလို မြန်မာ နိုင်ငံကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်နေသူတွေဆိုတာ ထင်ရှားလာပါတယ်။ မြန်မာတွေ ဆီက ဘာတွေ ကို အမြတ်ထုတ်နေတာလဲ ... ? အဖြေ က " ဘိန်း " ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလမ် ဘာသာ ကို ကာကွယ်သူများဆိုပြီး အမည်ခံထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကြီး " Al-Qaeda " တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က ပင်မ စီးပွားရေး သွေးကြောကြီးဟာ ဘိန်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ နိုင်ငံတွေ အားလုံး ကို ဝင်ရောက်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဘိန်း မှန်သမျှ ဟာ မြန်မာ့နယ်စပ်ကနေတဆင့် အာဖဂန်နစ္စတန် ပြီးတော့မှ ဥရောပ နဲ့ အမေရိကန် အပါအဝင် ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားကို ဖြန့်ချီနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူတို့ ရဲ့ အလုံခြုံဆုံး ဗဟို နေရာကို .. နိုင်ငံတကာ နဲ့ ( အဓိက အမေရိကန် နဲ့ ) အပြန်အလှန် သံတမန် ဆက်ဆံရေး မရှိဆုံး ဖြစ်တဲ့ .. လာဘ်စားမှု ကြောင့် ဘာမဆို ဖျောက်ဖျက်နှုတ်ပိတ်လွယ်တဲ့ .. မြန်မာ နိုင်ငံကို သူတို့ရဲ့ ပင်မ ဒုစရိုက် ဌာန တစ်ခု လို ခံတုတ်ကျင်းလို ရွေးချယ် အသုံးချခဲ့ကြတာ သဘာဝကျတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါဘဲ။ ဒီတော့ ခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ မှာ ကြည့်ရင် စတုန်းကတော့ ကုလား ၃ ယောက် ရဲ့ မိုက်မဲမှု နဲ့ စတင်ခဲ့ပေမယ့် ဆက်နွယ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဘာသာရေး နဲ့ သိသိသာသာ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှု ရဲ့ အနံ့တွေ ရောယှက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်း ပါးနပ် ဖို့ လိုနေပါပြီ။ ဒါဟာ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ တစ်ခုထဲမဟုတ်တော့သလို ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း စစ်စစ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ စနစ်တကျ စီမံဖန်တီးလိုက်တဲ့ အိမ်ကြက်ခြင်း အိုးမဲသုတ်မှု တစ်ခုပါဘဲ။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို လူမျိုးစု အနေနဲ့ တောင်းဆိုနေတာတွေ .. ကိုယ်ပိုင် နယ်နိမိတ်ရအောင် အတင်းတောင်းဆိုနေတာတွေ .. အားလုံးဟာ ဒီမသမာသူ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ကမ္ဘာမှာ နောက်ဆုံး အခိုင်အမာ ခြေကုပ်ယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ( ၁ ) နိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးမှုတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ Internal Corruptions တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့နိုင်ငံ ( ၂ ) ဘိန်း စိုက်ပျိုးဖြန့်ချီ ဖို့ ရေမြေအနေအထား အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံ ( ၃ ) မြန်မာ အစိုးရ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး မပြေလည်မှုကြောင့် DEA (Drug Enforcement Administration) ခေါ် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ကြီး) ရဲ့ မစွက်ဖက်နိုင်ဆုံး နိုင်ငံ အဲ့ဒိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမိ မြန်မာနိုင်ငံကို သူတို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတော့တာပါဘဲ။ မိတ်ဆွေတို့ အားလုံး အခု ကျွန်တော် တင်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကို ခေါင်းအေးအေးနဲ့ သေချာ နက်နက်နဲနဲ တွေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အစ္စလာမ် ဘာသာအရေခြုံထားတဲ့ " Al-Qaeda " ဒုစရိုက် အဖျက်သမား တွေ ရဲ့ ပရိယာယ် တွေကြားမှာ ကျွန်တော်တို့ လှပစွာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီ ကိစ္စ က နေ စတင်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ကနေ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံး မိစ္ဆာတွေရဲ့ ပိုက်ကွန်ထဲကို ကျရောက်ဖို့ လက်မတင်လေးဘဲ လိုပါတော့တယ်။ လက်ရှိ အစိုးရအပါအဝင် တပ်မတော် သားတွေ အပေါ် ... တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ .. ကျောင်းသားတပ်မတော်.. မိဘ ပြည်သူတွေ .. အားလုံးခံစားနာကျည်းခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေကို ခဏလေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ မေ့လိုက်ကြဖို့လိုနေပါပြီ။ ခု အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ ဟာ စက္ကန့်တိုင်းမှာ အသက်တမျှ အရေးကြီးနေပါပြီ။ ထစ်ကနဲ ဆိုတာ နဲ့ စစ်တပ် ကို စွပ်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြည်သူတွေကလဲ မေ့ဖျောက်ပစ်ပါတော့။ ထစ်ကနဲ ဆိုတာနဲ့ ကျောင်းသားတွေ တိုင်းရင်းသား (သူပုန်) တွေ လက်ချက်လို့ စွပ်ဆွဲတတ်တဲ့ အစိုးရ ရဲ့ သီအိုရီ ကိုလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့။ ထီကနဲဆို နီးရာ နိုင်ရာ တွေ့ကရာ ကုလား ကို ဆော်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သေးသိမ်တဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်တွေကို ဖျောက်ကြပါ။ တစ်ချို့ကလဲ ပြောပါတယ် သူတို့ကသာ မွတ်ဆလင်တိုင်း အကြမ်းဖက်သမား မဟုတ်ဘူးပြောနေကြပေမယ့် အကြမ်းဖက်သမား အားလုံးကတော့ မွတ်ဆလင်တွေပါဘဲ တဲ့ ဒါဟာ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ သေချာ ပြောင်းပြန်တွေးကြည့်ရင် မမှန်ကန်သေးပါဘူး ဒါဆို .. အကြမ်းဖက်သမားတွေ အကုန်လုံးက မွတ်ဆလင်တွေ ဖြစ်နေတာနဲ့ မွတ်ဆလင်တိုင်း အကြမ်းဖက်သမား ဖြစ်ရမှာလား လို့ သေချာပြန်တွေးပါ။ ဒါးပြမှု ကျူးလွန်သူ အများစုဟာ အမျိုးသားတွေ ဖြစ်နေတာနဲ့ အမျိုးသားအများစုဟာ ဒါးပြတွေပါ လို့ တွေးလို့မရဘူးဆိုတာ ဆင်ခြင်ကြပါ။ တစ်ကယ့် တရားခံ ရန်သူ အစစ် က ဘွားကနဲပေါ်လာနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဆယ်စုနှစ် ငါးခု မက ခွာချထားခဲ့တဲ့ လက်တွေ ပြန်တွဲဖို့ အရမ်းလိုအပ်နေပြီ။ အရေးကြီးရင် သွေးနီး မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အားလုံး လက်ခံကြပါ။ တစ်ကယ်တမ်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ နဲ့ စစ် ဖြစ်လာရင် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အားကိုးရာ ဟာ စစ်တပ် တစ်ခုထဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တပ်မတော် နဲ့ လက်တွဲပြီး ကမ္ဘာ မှာ မရှိသင့်တော့တဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိ တွေကို မျိုးဖြုတ်ပစ်ကြရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တစ်သက်လုံး ကြီးပြင်းလာပြီး ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ထပ်တူ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ အေးချမ်းမှု လိုလားသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို သူတို့ မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့မှု တစ်ခုအတွက် နဲ့ အလကား မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ အဲ့ဒါ ဟာ " Al-Qaeda " တွေ စီမံဖန်တီးယူနေတဲ့ မဟာဗျူဟာရဲ့ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှု လိုလားသူ မြန်မာပြည်တွင်း ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မွေးဖွား နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် စစ်စစ်တွေ အားလုံးကလဲ ခုချိန်ကစပြီး မိမိတို့ဟာ မြန်မာတွေ နဲ့ တစ်သားထဲရှိနေပါတယ် .. ဆိုတာနဲ့ .. ခု အကြမ်းဖက်မှုတွေ အားလုံးကို မိမိ တို့ လုံးဝ မထောက်ခံဘူး ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပါတယ် .. ဆိုတာရယ် .. လိုအပ်ရင် မြန်မာ ပြည်သူတွေ ဖက်က မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသား စိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ့ အစွန်းရောက် အဖျက်သမားတွေကို ကူညီ တိုက်ခိုက်ပါ့မယ် ... ဆိုတဲ့ သဘောထားတွေကို သိသာထင်ရှားအောင် အပြောရော အလုပ်နဲ့ပါ ထုတ်ဖေါ်ပြသကြပါ။ ဒါဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အဓိကရုဏ်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် .. မိမိတို့ဟာ မြန်မာပြည်ဖွား ကုလားလူမျိုးဆိုတာ ကို သိသာအောင် အဝတ်အစား သင်္ကေတ တစ်ခုခု နဲ့ ပြသဖို့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ မြန်မာ တွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေ သက်သေထားပြီး တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အမိနိုင်ငံတော် တိုင်းတစ်ပါးကျွန် မဖြစ်ရေးအတွက် တပ်မတော် နဲ့ ပြည်သူ အတူတူ လက်တွဲပြီး မိစ္ဆာဒိဌိတွေကို မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ ပပျောက်သွားအောင် စည်းလုံးစွာ ပါးနပ်စွာ ရဲရင့်စွာ တိုက်ထုတ်ပစ်ကြရတော့မယ်။ ဒါ ငါတို့လူမျိုး ဒါ ငါတို့ နိုင်ငံ ဒါ ငါတို့ ဘာသာတရား လာထိပါးရဲ ထိပါးကြည့် မင်းတို့ ရာဇဝင်တစ်ခုလုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက် အမျိုးပါပျောက်သွားစေရမယ် .. ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို ၂၄ နာရီလုံး မပြတ် နှလုံးသွင်းထားကြပေတော့။ အမျိုးသားရေးအတွက် ... မျိုးချစ်မြန်မာ မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2012/06/al-qaeda.html ယ္ခုစာနှင့် ဆက်နွယ်သုံးသပ်နိုင်ရန် အောက်ပါ ဆောင်းပါးကို ပူးတွဲ ဖေါ်ပြလိုက်သည်။ International Terror Links နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများ မူဆလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အစိုးရအပေါ်တွင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားဘာသာရေးအဖွဲ့များ၏ အကူအညီထောက်ပံ့မှုကို ရယူမှုမှာ အရေအတွက်အားဖြင့်နည်းပါးသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မတူညီသည့်အချက်မှာ မူဆလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစ္စလာမ္မစ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုများ ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) သည် ဘင်းဂလားဒေ့ရှ် ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့တွင် အခြေစိုက်သော အစွန်းရောက်မူဆလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနှင့် သိသာစွာဆက်သွယ်မှုများရှိနေသည်ကို ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကပင် နိုင်ငံတကာမှ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) သည် တည်ထောင်စဉ်အချိန်မှရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောက်ဘဇား (Cox’s Bazar) နှင့် စစ်တကောင်း (Chittagong) နယ်များအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများ၏ အကျိုးအတွက်ဟုဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီများ နေထိုင်ရာဒေသများကိုစုပေါင်းကာ မူဆလင်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် ထူထောင်ရေးအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရာတွင် လက်နက်ကိုင်အင်အား ရာဂဏန်းရှိသည်ဟုသာ သိရှိရသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းတို့အနက်မှ မည်သည့်တပ်ဖွဲ့ခွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဖက်ခြမ်းတွင်အခြေစိုက်၍ နိုင်ငံတကာမူဆလင်အကြမ်းဖက်များနှင့် မည်သို့ဆက်သွယ်သည် ဆိုသည်ကိုမူ အသေးစိတ်သိရှိရန် ကြိုးပမ်းဆဲဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) ၏တပ်သားအများစုသည် တရုတ်နိုင်ငံလုပ် အေကေ-၄၇ အော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဖယ်များ ၊ အပေါ့စားစက်သေနတ်များ၊ အာပီဂျီ(တူး) ဗုံးဆံလောင်ချာများ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ကို လက်နက်အဖြစ်ကိုင်ဆောင်ကြသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ၁၉၉၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ တိုက်ခိုက်ရေးပြုလုပ်ခြင်းများ အားနည်းလာခဲ့သော်လည်း မြန်မာ-ဘင်းဂလား နှစ်နိုင်ငံဒေသအတွင်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လက်နက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ခြင်းမှ ၀င်ငွေအများဆုံး ရရှိသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှ ရာဘိတယ်အလမ်အိုင်အစ္စလာမီ (Rabitaal-Alam-I-Islami) အဖွဲ့ ၏ ထောက်ပံ့ငွေများကို ရယူခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရသည်။ ၁၉၈၀ခုနှစ် ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ဂျမတ်-အီ-အစ္စလာမီ (Jamaat-e-Islami) အဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အစ္စလာမီချတ္တရရှီဘာ (Islami Chhatra Shibir) အဖွဲ့တို့မှ အကူအညီများကို စတင်လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့သည် အင်အားကြီး ဆွန်နီမူဆလင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ဟာရာကတ်-အာလ်-ဂျီဟတ်-အာလ်-အစ္စလာမီ (Harakat-ul-Jihad-ul-Islami) ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိနေခဲ့သည်။ (HuJI) ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှလူမျိုးစစ်သားများကို ထောက်ခံရန်ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် အယ်ကေဒါနှင့်တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့များ၏ ၀ါဟာဘီ နှင့် ဒျူရိုဘန်ဒီ (Wahabist and Deobandist) သင်တန်းနည်းလမ်းများကို မျှဝေသင်ကြားခြင်းများလည်းပြုလုပ်ရာမှ အင်အားကြီးမားကာ ကွန်ယက်များစွာလည်းဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သည်။ (HuJI) သည် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ဝင်များကို တပ်သားအဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့မှုပြီး ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ အူခီယာ (Ukhia of Cox’s Bazar) ရှိ ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့၏ စခန်းတစ်ခုကို (HuJI) အဖွဲ့မှ လက်လွှဲရယူခြင်းကြောင့်လည်း ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြယ်လှယ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရဘက်မှ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီအဖွဲ့သည် လစ်ဗျားသမ္မတ (ဟောင်း) မွမ်မာကဒါဖီ၏ ထောက်ပံ့မှုများ ရယူနေကြာင်း ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင် ၈ယောက်သည် လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်သင်တန်းများ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အထောက်အထားများအရ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) သည် ပါကစ္စတန် ကက်ရ်ှမီးယားဒေသရှိ (HuJI) ယခုအခေါ် ဟာရကတ်-အူလ်-မူဂျာဟစ်ဒင် (Harakat-ul-Mujahideen) အဖွဲ့အစည်း၏ထောက်ပံ့မှုများလည်း ရယူခဲ့သည်။ အာဖဂန် စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သော ဂါဘူဒင်ဟက်မတ်ယာ (Gulbuddin Hekmatyar) ၏ ဟဇ်-အီ-အစ္စလာမီ (Hizb-e-Islami) လှုပ်ရှားမှုများတွင် ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင်အချို့ကို ပါဝင်စေခဲ့ရာမှ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့တွင် ချိတ်ဆက်မှုအား ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်ဂါလီ ၃၅၀၀၀၀ (သုံးသိန်းခွဲ) ခန့်သည် နေထိုင်ကြပြီး အများစုသည် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး သင်တန်းကျောင်းများကို တက်ရောက်ကြသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ယင်းတို့အနက်မှ အချို့သည် တာလီဘန် အရာရှိများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ အခြားတာလီဘန်အဖွဲ့ဝင်ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှမှ တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခန့်အပ်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ကြကာ ဟာရကတ်-အူလ်-မူဂျာဟစ်ဒင် (Harakat-ul-Mujahideen) အဖွဲ့၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းတွင် ဂျမားအယ်အစ္စလားမီးယား (Jamiya-I-Islami) အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဘာဟာနူဒင် ဟာဘာနီ (Burhanuddin Rabbani) နှင့် အစ်တီဟတ်-အယ်-အစ္စလာမီးယား (Ittehad-I-Islami) အဖွဲ့ မှ အက်ဘဒါရက်ရဇူလ်ဆာယက်ဖ် (Abdur Rab Rasool Sayyaf) တို့၏ ထောက်ပံ့မှုများကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ရယူနေမှုများကို နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ထောက်လှမ်းရေးမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ (တစ်ရာ) ခန့်သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငတွင်းရှိ ခိုစ့် (Khost) မြို့ရှိ ဟဇ်ဘ်-အီ-အစ္စလာမီ (Hizb-e-Islami) အဖွဲ့ပိုင်သင်တန်းများတွင် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခြား ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အင်အား ၅၀၀၀ ခန့်သည်လည်း အလားတူသင်တန်းများကို ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်များက တက်ရာက်ခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ မြန်မာ့အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအရေးလေ့လာသူ ဘာတီးလ်လစ်တစ်တနာ (Bertil Lintner) ၏မှတ်တမ်းများအရ အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တစ်ဖက်သတ်လမ်းညွှန်ချက်များ ကို ခံယူကြရပြီး ခြေလျင်တပ်သား ၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးတပ်သားများ ဖြစ်လာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ အသုံးချခံ စစ်ဖက်ပစ္စည်း အဆင့်မျှသာ သတ်မှတ်ခံကြရကြောင်း နှင့် ထိုအခြေအနေကို မနှစ်သက်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။ မြန်မာမူဂျာဟစ်ဒင် များသည် တာလီဘန်အဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အမေရိကန်စစ်တပ်မှ အာဖဂန်အခြေစိုက်စစ်စခန်း ဖွင့်လှစ်ချိန်အထိ ရှိနေခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အချို့ကို အမေရိကန်တပ်မှ လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ “မြန်မာအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ရန် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု အတွေ့အကြုံများ ရယူနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး ကိုရမ်ကျမ်းစာကို လိုက်နာသောမူဆလင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Sharia Law) ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သွတ်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်” ဆိုသောထွက်ချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့သောအဖွဲ့တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား အချို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့မရောက်ဖူးသော စစ်သွေးကြွများဖြစ်ကြသည်။ တာလီဘန်စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားသော်လည်း အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း တာလီဘန်တို့ဘက်မှ ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့သော မူဂျာဟစ်ဒင်များသည် ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနယ်စပ်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေး လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အပါအ၀င် အခြားတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့များအား သင်တန်းပို့ချနေမှုများကို ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များက မြန်မာအစိုးရကို ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲမည်ဟု (ABMU) အဖွဲ့ကကြေငြာစဉ်က အာရပ်နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံများမှ မူဂျာဟစ်ဒင်များ အပါအ၀င် အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ စစ်သွေးကြွများကလည်း ပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ ကတ်ရ်ှမီးယားဒေသမှ ပါကစ္စတန်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော ဟဇ်ဘူလ်မူဂျာဟစ်ဒင် (Hizb-ul Mujahideen) ကလည်း လေ့ကျင့်ရေးသမားများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မူဆလင်သူပုန်များကို လေ့ကျင့်မှုများပေးရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။စက်တင်ဘာ၂၀၀၁အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီအထိ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများကို မြန်မာအစိုးရနည်းတူ အမေရိကန်အစိုးရသည်လည်း အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေတစ်ရပ်အနေဖြင့် များစွာလေ့လာမှုများမရှိခဲ့ပေ။ လက်ရှိအချိန်ထိ ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့ဝင်မူဆလင်အကြမ်းဖက်တို့၏ နိုင်ငံတွင်းအင်အားသိသာစွာကြီးမားလာခြင်း သိသာထင်ရှားသောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ မဖြစ်ပွားအောင် မြန်မာအစိုးရမှလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သို့ရာတွင် စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ တိုက်ခိုက်မှုများ အပြီးတွင် နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုများအရ အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်သည် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာကြောင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း အယ်ကေဒါအဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သွယ်ဝိုက်သိမ်းသွင်းထားမှုများရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် “အယ်ကေဒါ၏ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးမားဆုံးအဖွဲ့ခွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည်” ဟုပင် သတ်မှတ်သင်ကြားခြင်းခံရသည်။ သဘောတရားချင်းတူညီသော သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တစ်ရပ်ကို စီအန်အန် သတင်းကွန်ယက်ဌာနမှလည်း ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့ဖူးသည်။ ထိုကြေငြာချက်များကို အသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းးမရှိသေးသော်လည်း ရိုဟင်ဂျာတပ်ပေါင်းစု (Rohingya Solidarity Organization) အဖွဲ့၏အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အယ်ကေဒါအဖွဲ့သြဇာခံဖြစ်ကြောင်းကို အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့မှ သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ဘင်းဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ပါဝင်စားသူ ရိုဟင်ဂျာစစ်သားများ စုဆောင်းရန်အတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ လာရောက်သိမ်းသွင်းသူများသည် အယ်ကေဒါ အဖွဲ့မှ စေလွှတ်ခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း တိကျသောသတင်းများ ရရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်တို့၏ အာဖဂန်စစ်ပွဲမှတ်တမ်းများအရ အိုစမာဘင်လာဒင်၏ ဗီဒီယိုတိပ်ခွေတွင်လည်း အာရပ်ဘာသာဖြင့် “မြန်မာနိုင်ငံမှ မူဆလင်တရားတော်အလိုအရ တိုက်ခိုက်နေသူများ” ကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ကို သိရှိရသည်။ မှတ်တမ်းပြုစုရေးသားသူ - စာအုပ်ကြီး (FaceBook User)
မျိုးချစ်မြန်မာ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
Posted by Eagle info dash at 13:11 No comments:
Posted by Eagle info dash at 16:58 No comments: